နေရာချထားခြင်းနှင့်ခြေရာခံခြင်းကိရိယာများ | Rieter Professional Credit Bureau
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ဆth္ဌမအသိသည်မည်သည့်အရာထက်မဆို ပို၍ ကောင်းသည်
အကယ်၍ သင်သည်ကိစ္စတစ်ခုကိုဖမ်းချင်ပါကလူမှုရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်စတင်ရန်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည်။
တက်ရောက်သူတားဆီးဖို့ဆက်သွယ်ရေး software ကို LINE
အကယ်၍ သင်သည်အခြားပါတီအားသင်၏တည်နေရာကိုအသိပေးရန်၊ လျှို့ဝှက်စွာစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးနေသောသို့မဟုတ်အံ့အားသင့်စရာပါတီတစ်ခုကိုစီစဉ်ရန်မလိုပါက၊ အညှာကိုမချိုးလိုပါကအောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည်။ ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်
အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ခြေရာခံမိုဘိုင်း positioning ကို
IOS, APP သည်သင်၏ပျံသန်းမှုကိုလွယ်ကူစွာ software မိတ်ဆက်ခြင်းကိုစစ်ဆေးသည်
ခိုးယူမှုဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင် GPS စနစ်ကား tracker ခိုးနားထောင်, သင်မေးမြန်းပါ
ခရက်ဒစ်သတင်းအချက်အလက်အရာရှိများကလေ့သုံးလေ့ရှိသည့်ခိုးယူမှုဆန့်ကျင်ရေးဆန့်ကျင်ရေးနှင့် GPS ဆန့်ကျင်သောကား tracker များကိုထိခိုက်လွယ်မှုများကိုချိန်ညှိနိုင်သည်၊ ရှာဖွေမှုအကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်၊ ဝေးကွာသောအချက်ပြလိုင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်နှင့် pinhole ကင်မရာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှာဖွေနိုင်သည်။ အသံသို့မဟုတ်တုန်ခါမှုရွေးနိုင်သည်။ အပြင်နားကြပ်ကိုချိတ်ဆက်ပြီး၊ အမျိုးအစားကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အလင်းကိုသုံးနိုင်သည်
၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျယ်ပြန့်သည်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်မည်သည့်နေရာ၌ရှိနေပါစေသင် GPS signal blocker ကိုဖွင့်နေစဉ်အတွင်း 3G, 4G, 5G နှင့် GPS ဂြိုဟ်တုများ၏တည်နေရာအနေအထားကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ တည်နေရာသည်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ရေငွေ့ပျံခြင်းနှင့်တူသည်။ ကားများသီးခြားစီသယ်ဆောင်ရန်ထုတ်ကုန်များရှိပါသည်။
APP မှခြေရာခံရန်မလိုသောသူများအတွက် anti-tracking ခေတ်
မီဒီယာစစ်တမ်းများအရ၊ အကယ်၍ သင်သည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲတည်နေရာလုပ်ဆောင်ချက်ကိုပိတ်ရန် privacy setting ကိုသုံးလျှင်ပင် Google နှင့် Android ၀ န်ဆောင်မှုများစွာသည်သင်၏တည်နေရာအချက်အလက်ကိုသိမ်းဆည်းထားဆဲဖြစ်သည်။ Location History အင်္ဂါရပ်ကို“ A သုံးပါ
positioning ရှိသည့်နေရာတွင် anti-positioning ရှိသည်! တည်နေရာဆန့်ကျင်ရေးအက်ပလီကေးရှင်း၊
စျေးကွက်တွင်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာယူခြင်းသည်ကိုယ်ပိုင်တည်နေရာ privacy ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ FakeGPS အတု positioning app - Android အသုံးပြုသူများ
HTC, Samsung Samsung အသုံးပြုသူများသည်ဘုံတည်နေရာ
HTC သုံးစွဲသူများ "ချိန်ညှိချက်များ"> "တည်နေရာ"> "ဖွင့်ပါ"၊ "Google တည်နေရာသမိုင်း" ကိုနှိပ်ပါ &
စုံတွဲများ, စုံတွဲများအတွက် Real-time တည်နေရာခြေရာခံခြင်းရှိရမည်
အချိန်နှင့်တပြေးညီတည်နေရာကိုခြေရာခံခြင်းသည်သမိုင်းဝင်နေရာများကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။ စုံတွဲများနှင့်စုံတွဲများအတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်တည်နေရာအက်ပလီကေးရှင်းကို Android သုံးစွဲသူများအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ မိုဘိုင်းဒေါင်းလုပ်
မိသားစု၊ အကြီးအကဲများ၊ ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသည်စမတ်ဖုန်းကိုမသုံးနိုင်ပါကသို့မဟုတ်၎င်းအားမသုံးနိုင်ပါကပျောက်ဆုံးသွားမည်ကိုကြောက်ရွံ့နေလျှင်ကော။ အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတောင်ဆုံးရှုံးသွားမှာလား။ မျိုးဆက်သစ် GPS ဂြိုလ်တုခရီးဆောင် Tracker သည်သင့်ကိုအချိန်မရွေးသက်သာစေသည်။
GPS tracker အသုံးပြုမှုနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်
ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ စီးပွားရေးအဖိုးတန်မှုများကိုခြေရာခံခြင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုခြေရာခံခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ရေပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခြေရာခံခြင်း၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နေရာချထားခြင်း၊
ကား GPS ကိုခြေရာခံတည်နေရာဝယ်ယူအချက်များ
ကောင်းမွန်သော GPS တည်နေရာကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်းလူအများသည်ကားအသေးစားနှင့်စျေးပေါသောအကြံဥာဏ်ရှိသောကြောင့်ကား GPS လမ်းကြောင်းတည်နေရာကိုအာမမခံသောကြောင့်လူအများတို့သည်များသောအားဖြင့်ကား GPS လမ်းကြောင်းတည်နေရာကို ၀ ယ်လေ့ရှိသည်။ Rieter ကကားကောင်းကောင်း GPS လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုဝယ်ရမယ်ဆိုတာသင်ပေးတယ်
2020 စုဆောင်းရမည်! အခြားတစ်ဝက်ဘယ်မှာလဲဆိုတာသိချင်သလား။ သေးငယ်သည်
၂၀၂၀ တွင်နောက်ဆုံးပေါ်မိုဘိုင်းတည်နေရာနှင့် APP ကိရိယာကိုခြေရာခံခြင်း၏နိဒါန်း။ အင်တာနက်ပေါ်မှ APPs များကိုတွေ့ရသလား? သင်၏ဖုန်းထဲသို့ထည့်ပြီးရှာဖွေရန်မလွယ်ကူသည့် software ကိုသင်ပေးပါ။ သင်မည်သည့်နေရာသို့ရောက်သည်ကိုသိလိုသောနေရာကိုရှာဖွေရန် ၂၄ နာရီ